Vibrating motors dzekugadzira uye kutengesa indasitiri vibration mota
Industrial vibrating motors yekugadzira uye kutengesa
Vibrating motors dzekugadzira uye kutengesa
hombe vibration mota, maindasitiri anodedera mota, yakanaka vibration mota mutengo, ine simba vibration mota, 110v inodedera mota & 240V, magetsi anodedera mota, kongiri inodedera mota, magetsi emagetsi anoshandiswa ekongiri anodedera etafura zvirongwa, anodedera mota ye hopper.
Isu Tiri Global Global Vibration Motors Kugadzira uye Kutengesa kunze kambani kubva kuChina.
Maindasitiri Vibration Motors
Diki kana hombe yemagetsi vibration shaker mota, 220v kana 380v kana imwe mota vibrator, chingotizivisa isu uye tichazopa iyo yakanakisa.
Tsvaga Mamwe madheyaji nezve motors edu
Mugadziri weVibratory uye Unbalance Vibrating Motors
Yedu Vibration mota magadzirirwo akakwana, akakodzera kuAmerican kuisa 110V, Europe 220V, yakanaka oparesheni mhedzisiro uye zvakakodzera kurumbidza! vibration mota ine akasiyana maficha. Inogadzirisa dambudziko rezvinhu zvakasarudzika mukambani medu uye rinobatsira kwazvo.
Wide application yakakwana yekushandira maindasitiri
Yedu yemagetsi kongiri vibrator yemagetsi vibrator yemagetsi vibrator mota yakajairika inodhonzera inowanikwa akasiyana emagetsi makina anogadzirisa, akadai vibrating feeder, vibrating screen, oscillating conveyor, vibratory shakeout muchina, vibrating kudedera tafura uye zvichingodaro. Inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi emagetsi, zvekuvakisa, marasha, mugodhi, simbi, makemikari indasitiri, indasitiri yechiedza, yakawanikwa pamwe nemamwe maindasitiri.
Vairous Mounting Option yesarudzo dzemhando dzakawanda
Mota inoyevedza vibration mota kuiswa kweimwe inogadziriswa eccentric block kumapeto ese maviri eoror shaft, uye eccentric shaft necentrifugal simba rinogadzirwa nekumhanya-kutenderera kutenderera kuti uwane inonakidza simba. Vertical vibrating motor zvikamu zvinotakura tembiricha yekukwira mukureba kupfuurira kushanda kunogona kudzorwa zvinobudirira, zvekuti iyo vertical vibration mota ine hupenyu hwakakosha.
Iyo Compact dhiza yakanaka kukodzera yakawanda maindasitiri.
Light muchina uremu, diki vhoriyamu, nyore kuvaka, nyore kuisa uye kugadzirisa. Yakazara yakavharwa kuvakwa, inoshandiswa mune chero mamiriro ekushanda asina kana kuputika-chiratidzo chinodiwa.
Yakasimba kurongedza nzira yekuchengetedza yakachengeteka panguva yekufambisa.
fumigation matanda kesi kana mutengi chikumbiro.Izvakanaka kuti uchinje iyo inodedera simba nekugadzirisa dhiraivhi angle ye eccentric block.
Vibration Motors Isu Tinotipa
Madiki ekudengenyeka emota kune hombe, maindasitiri anodedera mota pane matatu nhanho, ine simba vibration mota ine hombe bhiza, imwechete chikamu vibration mota yekushandisa pamba kana nyore kushandisa. shanduka inomhanya vibration mota, inodedera mota yetafura inodedera, mota inodedera ye hopper
Vibration mota YZU
Industrial vibration mota nemutengo wakanaka
Vibration mota MVE
Vibration mota MVE Guruva Zvinoratidza Mvura Uchapupu
Vibration mota YZS
Yakasimba Simba Yakakura vibration mota
Vibration mota Mini Type
Mini Vibration mota yemukati vibrator ine Thermosensors
Vibration mota YBZ
Kuputika Proof matatu-chikamu chikamu asynchronous vibration mota
Vibration mota DC Kuti AC
24V 12v dc vibration mota Brushless ine controller iri kutengeswa
Vibrator mota 370
Yakabatanidzwa uye Yakavharirwa Precision Vibration Motors
Vibrator mota 1.5-6V
Tiny DC Vibration Motors Miniature yakazara-yakavharwa masheti kana hafu
Kusarudzwa kweVibratory Motors
Tinogona kukutumira iwe unodedera mota mota kana isu takadzokorora kubvunza kwako. Iyo yakanyanya kunaka quote inotumirwa panguva imwe chete. Maindasitiri Vibration Motors zvekushandisa pane zvakawanda zvinogadzirisa michina senge kudedera feeders, vatyairi, kudedera matafura, zviyero, mabhegi mazhinji emafirodha, mabhegi mazhinji emabhegi uye nezvimwe
“Kuzvipira kwakandibatsira kudzidza hunyanzvi uye kusangana nevanhu vakanaka pasirese. Zvinondiunzira mufaro kuona mumwe munhu achinyemwerera nekuti ini ndasarudza kuzvipira nhasi uye izvo zvinondiunzira rugare rwakazara. Kutenda kune Vanopa nekundipa mukana wekuzvipira ”
Kuzvipira Team Tungamira
"Ndagara ndiri nhengo inoshingaira yemunharaunda asi nguva dzose ndainzwa sekuti ndinogona kuita zvakanyanya. Rinopa sangano rerudo rakandipa sarudzo yekushandira chimwe chinhu chandiri kunyatsofarira. Pese pandinenge ndiri chikamu chemushandirapamwe unobudirira, ndinonzwa kunge ndakanamatira zvakawanda. ”
Campaign Yekutsvaga Muongorori
“Chimwe chikamu chinoshamisa cheMupi ndechekuti ivo vanokurega zvechokwadi kuti ubatsire kuchinangwa chakakura munzira yaunoda. Ini ndinozvipira nguva dzose uye zvese zvidiki zvandinoita zvinoongwa. Ndiri kuona kuti kunyangwe zviito zvidiki diki zvinogona kuita musiyano wakakura muhupenyu hwemumwe munhu - simba rechokwadi rechigaro.
Tambira zvinogadziriswa uye zvemazvino nhau zvakananga kubva kuchikwata chedu. Ingoisa email yako pazasi:
Sogears inopa anenge ese magetsi emagetsi vibrator mota zvigadzirwa simba-inoshanda indasitiri.